မှားယွင်းနေသည်က WINDOWS7မှာ "ဒီမေတ္တာရပ်ခံစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတိုးလိုအပ်ပါတယ်" - WINDOWS ကို - 2019
ဒီအမှားပြင်ပေးဖို့ကို Windows7မှာ "ဒီမေတ္တာရပ်ခံစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတိုးလိုအပ်ပါတယ်"
Windows7က command shell ကိုအတွက်မဆိုတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေ, သို့မဟုတ်သင်လျှောက်လွှာ (ကွန်ပျူတာဂိမ်း) ကို run လိုက်တဲ့အခါ, သင် error message ကိုခံခြင်းငှါ: "ဒီမေတ္တာရပ်ခံစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတိုးလိုအပ်ပါတယ်"။ ဤအခြေအနေသည်အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်အပြေးတစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်လျှင်ပင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှစတင်။
Vindovs7ခုနှစ်တွင်အကောင့်အသစ်များ၏နှစ်မျိုးအကောင်အထည်ဖော်။ တဦးတည်းပုံမှန်အသုံးပြုသူအဘို့ဖြစ်၏, ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတရားပေတည်း။ ဒီအကောင့်ကိုက "စူပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူး" ဟုခေါ်သည်။ အသံဖမ်း၏ဒုတိယအမျိုးအစားများ၏အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော၏ဘေးကင်းလုံခြုံစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ပိတ်ထားသည်။
"အမြစ်" ၏အယူအဆရှိသည် nix.tehnology အပေါ်အခြေခံပြီးစနစ်များအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ "podsmotreno" ၏ဤအခွဲခြာ - "စူပါအသုံးပြုသူ" (Microsoft မှထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအခြေအနေ၌ - ဤသည် "စူပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူး" ဖြစ်ပါတယ်) ။ ယခုကြှနျုပျတို့အခွင့်အရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်မှလှည့်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows တွင်စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများရရှိရန်မည်သို့ 7
နည်းလမ်း 1: "စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် Run"
အချို့ကိစ္စများတွင်ပြဿနာကိုပြင်ပေးဖို့, သင်စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်လျှောက်လွှာကို run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ချဲ့ထွင်မှုနှင့်အတူ Software ကိုဖြေရှင်းချက် .VBS, .cmd, .bat အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးများနှင့်အတူပြေး။
လိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်ကို Right-mouse ကိုကလစ် (ဒီဥပမာထဲမှာ, စကားပြန်7သင်း windose) ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows7မှာ command line ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
သငျသညျအလွန်မကြာခဏ program တစ်ခုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ရှိပါက, သင်သည်ဤအရာဝတ္ထုများ၏ဖြတ်လမ်းဂုဏ်သတ္တိများကိုသွား, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါသင့်တယ်။
အဆိုပါဖြတ်လမ်းပေါ်တွင် right-click နှိပ်ပြီးနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိအဖို့ go "Properties ကို"
။ ပုဒ်မခွဲအတွက် Moving "အသုံးပြုပုံများ"ထိုအကို tick တံဆိပ်များကိုသတ်မှတ် "အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ဒီ program ကို run" နှင့် button ကို click "အိုကေ".
ယခုဤလျှောက်လွှာကိုအလိုအလျောက်လိုအပ်သောအခွင့်အရေးများနှင့်အတူဖြန့်ချိသည်။ ထိုပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေးလျှင်, ဒုတိယနည်းလမ်းကိုဆက်လက်။
Method ကို 2: "စူပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူး"
စနစ်ကြောင့်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်ပါလိမ့်မည်ဒီ mode မှာဖြစ်သကဲ့သို့ဤနည်းလမ်းကိုသည်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်သည်။ မည်သည့် setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူ, သင့်ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့စတင်ရန်ကြပါစို့။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ထုတ်ကုန်၏ဒီဗားရှင်းအဘယ်သူမျှမမှတ်ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲမှု console ကိုတွင် "ပြည်တွင်းအသုံးပြုသူများ" ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဤနည်းလမ်းကိုအခြေခံ Windows7ကိုအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
menu ကိုသွားပါ "Start"။ PCM ဒြပ်စင် Push ကိုအညီ "ကွန်ပျူတာ" နှင့်ကိုသွား "စီမံခန့်ခွဲမှု".
console ကိုရဲ့ဘယ်ဘက် pane ထဲကကို "ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲမှု" ပုဒ်မခွဲအတွက်သွားရ "ဒေသတွင်းကအသုံးပြုသူများ" ပွင့်လင်းတဲ့ item "အသုံးပြုသူများ"။ တံဆိပ်ပေါ်မှာ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကို (ယွမ်) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး"။ ဆက်စပ်မီနူးသို့မဟုတ် update ကိုခုနှစ်တွင် (လိုအပ်ပါက) password ကို။ ပစ္စည်းကိုသွားပါ "Properties ကို".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, box ကိုမှတ်သားညှစ်စစ်ဆေး "အကောင့်ကိုပိတ်ထား".
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အမြင့်မားဆုံးအခွင့်ထူးအကောင့်နဲ့ကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်စနစ်ကအနေအထွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ခြေထဲသို့ထည့်သွင်းပါ။
Method ကို 3: ဗိုင်းရပ်စ်စကင်လုပ်နေ
တချို့အခြေအနေတွေမှာ, အမှားသင်၏ system အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, သငျသညျ7antivirus program က windose စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရပါမည်။ ကောင်းသောအခမဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲများစာရင်း: AVG Antivirus ကိုအခမဲ့, Avast-အခမဲ့-antivirus ကို, Avira, McAfee က, Kaspersky-အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်အမှားတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ပါဝင်အစီအစဉ်ကိုကူညီပေးသည်ပပျောက်။ အဖြေတစ်ခုအမြင့်မားဆုံးအခွင့်ထူးအကောင့် ( "စူပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူး") နှင့်အတူ activation အားဖွငျ့သာဖြစ်နိုင်ပါကအလွန် operating system ကို၏လုံခြုံရေးလျော့နည်းစေသည်ကိုသတိထားပါ။